ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအလုပ်လုပ်ပြီး Hot Spot (Hotspot) ကို Linux ပေါ်တွင်မည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း။ | Linux မှ
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအလုပ်လုပ်ပြီး Hot Spot (Hotspot) ကို Linux ပေါ်တွင်မည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် «Sistema Operativo» အချို့ပေါ်တွင်တပ်ဆင်နိုင်ပါသည် ကွန်ပျူတာ (desktop, mobile သို့မဟုတ် laptop)နှင့် ဝါယာကြိုးနှင့်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုသေချာသည်မှာတစ်ချိန်ချိန်တွင်၎င်း၏အသုံးပြုသူ / ပိုင်ရှင်သည်a/ configure ပြုလုပ်လိုသည် «Punto de acceso caliente»ဆိုလိုသည်မှာ «Hotspot» သူ့အကြောင်းကို ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မျှဝေခြင်း၏အားသာချက်ယူပါ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု သင့်ရဲ့မှတဆင့်ကြိုး ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကို interface အခြားကိရိယာများနှင့်အတူ။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ဖြစ်စေဖြစ်စေ «Windows, MacOS o Linux» မင်းလုပ်နိုင်တယ် «Hotspot» မှတဆင့် Command Line Interface (CLI)ဆိုလိုသည်မှာ terminal သို့မဟုတ် console တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၌တည်၏ «Windows y MacOS» သင်ဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည့် third-party application များမြောက်များစွာရှိသည် «Hotspot» မှတဆင့်ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့လမ်းအတွက် ဂရပ်ဖစ် Interface (GUI)။ On «Linux» ၎င်းတို့သည်များများစားစားမဟုတ်သော်လည်းသင်ကိုအလွယ်တကူသုံးနိုင်သည် «Gestor de conexiones de red» သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ၏ «Entorno de Escritorio».
ပထမ ဦး စွာ၊ «Punto de acceso caliente o Hotspot» ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ခံစားခွင့် တစ်ရှိကွောငျးဒါ device တစ်ခုမှတဆင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးကြိုးတွေမပါပဲ၊ Wi-Fi ကိုအဓိကအားဖြင့်ကမ်းလှမ်းရန် အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုသို့မဟုတ်အခြားအရင်းအမြစ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ ပြည်တွင်းကွန်ယက် (LAN) o နိုင်ငံတွင်းသို့မဟုတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက် (MAN / WAN).
ဒုတိယအချက်မှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်သက်ဆိုင်ရာပေါ် မူတည်၍ အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်သည် «Entorno de Escritorio» (Gnone, Plasma, KDE, XFCE, သစ်ကြံပိုး၊ Mateယင်း၏အပေါ်အခြားသူများအကြား) «Distro GNU/Linux».
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်aကိုသုံးမည် «Laptop» Intel i34Core CPU နှင့်6GB RAM နှင့်အတူတူဖြစ်သည် «Distribución MilagrOS GNU/Linux 1.2» ယင်းနှင့်အတူ «Entorno de Escritorio XFCE» နှင့် «Gestor de conexiones de red» ခေါ်တူညီတဲ့၏ «Miniaplicación Gestor de la red», အမှန်တကယ်စီမံခန့်ခွဲသော မင်္ဂလာပါ ထို့အပြင်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည် Gnome.
1.1 ခြေလှမ်း 1
1.2 ခြေလှမ်း 2
1.3 ခြေလှမ်း 3
1.4 ခြေလှမ်း 4
ဖွင့်ပါ «Gestor de conexiones de red» သူ၏ «Distribución GNU/Linux»:
တောင်းခံရန် «Gestor de conexiones de red» အသစ်တစ်ခုထည့်သည် «conexiones de red» အဆိုပါ «Distribución GNU/Linux» အသုံးပြုခံ့:
ပြောပါ «Gestor de conexiones de red» အသစ်က «conexiones de red» အမျိုးအစားဖြစ်လိမ့်မည် «Inalámbrica»:
အသစ်က၏ parameters တွေကိုတည်းဖြတ်ပါ «conexiones de red»:
ခေါ် tab ကိုပါ «Inalámbrica» ဒီအသစ်ပြတင်းပေါက်၏ဟုခေါ်တွင် «Editando Conexión inalámbrica 1» အောက်ပါကွက်လပ်များကိုသက်ဆိုင်ရာအကြံပြုအကြံပြုချက်များနှင့်ဖြည့်ရမည် -
ဆက်သွယ်မှုအမည်: Hotspot (သို့မဟုတ်သင်ရွေးချယ်သောတစ်ခု)
SSID- Hotspot (သို့မဟုတ်သင်ရွေးချယ်သောတစ်ခု)
mode: Hotspot သို့မဟုတ် Access Point
စက်ကိရိယာ: Wlan0 (သို့မဟုတ်ရရှိနိုင်သည့်တစ်ခု)
ခေါ် tab ကိုပါ «Seguridad inalámbrica» အောက်ပါကွက်လပ်များကိုသက်ဆိုင်ရာအကြံပြုအကြံပြုချက်များနှင့်ဖြည့်ရမည် -
လုံခြုံရေး: WPA နှင့် WPA2 ကိုယ်ပိုင်
Contraseña: Hotspot * 2019 (သို့မဟုတ်သင်ရွေးချယ်သောတစ်ခု)
ပြီးတော့ခေါ် tab ကိုပါ «Ajustes de IPV4» အောက်ပါကွက်လပ်များကိုသက်ဆိုင်ရာအကြံပြုအကြံပြုချက်များနှင့်ဖြည့်ရမည် -
ကျန်ရှိနေသေးသောအရာများသည်ခေါ်သည့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြစ်သည် «Guardar» အဆိုပါ configuration ကိုအပြီးသတ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် «Punto de Acceso» o «Hotspot»။ ငါဖန်တီးသောကွန်ပျူတာနေစဉ်သတိရပါ «Hotspot» အတူတူပင် enable လုပ်ထားပါက၎င်းမှဝင်လာသော connection များကိုပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ «Wi-Fi» ရှာဖွေတွေ့ရှိ။ သင်ဆက်သွယ်မှုဖြုတ်လိုက်တာနဲ့သင်မြင်ရပါလိမ့်မယ် «Redes inalámbricas»အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း -
နောက်ဆုံးနှင့်အနည်းဆုံးတော့သင်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးသားဖြစ်နိုင်သော်လည်းသတိရပါ «Hotspot»ဒါကသင်လုပ်လိမ့်မယ်လို့မအာမခံပါဘူး အင်တာနက်သုံးပါဒီအမျိုးအစား၏အခြားအချက်များပေါ်တွင်မူတည်နိုင်ကတည်းက «Enrutamiento», အခြားအရာများအကြား, ကွန်ပျူတာကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ဖြစ်စေမ «Módem», un «Módem/Router», «Router» o «Red local empresarial»နှင့်၎င်းဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းများသည် network ၏ဆက်သွယ်မှု (traffic) အားလုံးကိုမည်သို့စီမံသည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်းရိုးရှင်း။ အလုပ်လုပ်ရန်ဖန်တီးပါ «Hotspot» ဇာတိကိုအသုံးပြုခြင်း «Gestor de conexiones de red» သူ၏ «Distribución GNU/Linux» ၎င်းသည်အလွန်အကျွံသို့မဟုတ်မြင့်မားသောနည်းပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတလိုအပ်သောအရာမဟုတ်ပါ။ ပြင်ပဂရပ်ဖစ်လုပ်ငန်းသုံးပရိုဂရမ်တစ်ခုနှင့်စမ်းသပ်လိုပါကသင့်အားအသိပေးရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည် «Wicd» y «WiFi Hostapd AP»။ အဆုံးစွန်သောအပေါ်၎င်း၏တရားဝင် repository ကိုရှိပါတယ် Launchpad. အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုသင်ကြိုးစားလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အကြောင်းအရာပေါ်တွင်ဤတရားဝင် link ကိုသင့်အားထားခဲ့မည် DEBIAN GNU / Linux.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအလုပ်လုပ်ပြီး Hot Spot (Hotspot) ကို Linux ပေါ်တွင်မည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း။
PICCORO Lenz McKAY ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး .. နှင့် .. ABAWIFICANTV ?? ဗင်နီဇွဲလားရှာဖွေတွေ့ရှိ! XD
ဒါဟာအသေးစိတ်ပြောတာကောင်းပါတယ်။ (သင်ပြောပေမယ့်အသေးစိတ်ပြောချင်ပါတယ်) ဒါကသင့်ရဲ့ Wi-Fi အင်တာနာကိုအခြားစက်တွေအတွက် Wi-Fi ထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ဆောင်စေတယ်ဆိုတဲ့အချက်က .. ဖြစ်နိုင်ချေနည်းနည်းလေးပဲ .. ..
PICCORO Lenz McKAY အားစာပြန်ပါ
ကောင်းသောဝင်ပေါက်။ ဒါဟာအဆုံး၌အနည်းဆုံးငါ၏အရှုးကနေပိုပြီးမှတ်သားစရာများသော command ကို console ကိုကနေတူညီတဲ့အဆင့်တွေကိုရှင်းပြဖို့ကောင်းပါတယ်လိမ့်မယ်။
အလွန်အသုံးဝင်သည်။ Skype ရဲ့ bandwidth ကို mobile မှာကန့်သတ်မဲ့နည်းလမ်းရှာနေတာ။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာမှဝင်ရောက်ခွင့်မှတ်ကိုဖြတ်သန်းသွားသော bandwidth ကိုကန့်သတ်ထားသည်။
မင်္ဂလာပါ, Aprilio! မင်းကိုကူညီရတာဝမ်းသာပါတယ်
hector zamudio ဟုသူကပြောသည်
hector zamudio သို့ပြန်သွားပါ
Gaming week: Linux အတွက်ဘာအသစ်လဲ
PayPal, Visa, MasterCard သည် Facebook ၏ virtual ငွေကြေးဖြစ်သော Libra ကိုပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်